Schrenker Faked Death वित्तीय परेशानी देखि बचने को लागि
अमीर धन मनी म्यानपावरले फ्लेड चार्जबाट बचाउन विमान, फटेको मृत्युबाट निस्केको छ
अमीर व्यापार मालिक र मुद्रा प्रबन्धक मार्कस Schrenker जनवरी 2009मा सुर्खेत, जब उनले आफ्नो फ्याक्स नकली गर्ने प्रयासमा आफ्नो सानो एक इन्जिन इन्जिनियरिङ विमानबाट पैच्याचिंग गरेर धोखाधड़ी को परिणामहरु लाई बचाउन प्रयास गरे।
एक पटक, मार्क्स Schrenker सबै केहि थियो। उनले तीन इन्भेस्टमेंट परामर्श फर्मको स्वामित्वमा राखेका थिए, जसको ज्यानिस्टको विशेष इंडियानापोलिस उपरबस्थित उनको पत्नी र छोराछोरीसँग बस्न, $3मिलियन डलरको जलपूर्वा घरमा डक र एक ठूलो स्विमिंग पूल थियो।
फ्लाइङ उनको एक शौक थियो र उनले दुई विमानको स्वामित्व पाएका थिए जसमा उनीहरूले भोक छुट्ट्याउन थाले। तर जनवरी 2009मा यो सबै दुर्घटनाग्रस्त भयो।
बाहिर आइडिलिक लाइफ
मार्कस Schrenker को 22 नोभेम्बर, 1970 मा जन्मेको थियो। तिनी मेरिलविले, इंडियाना मा बसी जुन शिकागो महानगरीय क्षेत्र मा स्थित छ। 1989मा श्रेनरले मेरिलविले हाई स्कूलबाट स्नातक गरे, र त्यसपछि पर्डु विश्वविद्यालयमा कलेज गए। यो पर्ड्यु थियो कि उनले (पूर्व पत्नी) मिशेलले विवाह गरे र विवाह गरे र उनीहरु सँगै तीन छोराछोरी थिए।
विस्फोटको रूपमा श्लेकरको जीवनको रूपमा देखा पर्यो, त्यहाँ पनि अँध्यारो पक्ष थियो कि जो मार्कस वा वरपरका बासिन्दाहरूसँग बस्न थाल्छन् उनीहरूको वरिपरिका असफलताको बिचमा धेरै चिन्ता थियो।
Schrenker गुस्सा, अपरिहार्य र संयोजन गर्न अनुकूल र करिबमेटिक हुन जाँदैछ। र, आफ्नो पड़ोसी टम Britt abcnews.go.com संग एक साक्षात्कार मा, यस प्रकार को अनियमित व्यवहार को एपिसोड अधिक बारिश भए पछि त्यो ठूलो भयो।
द्विध्रुवी विकार संग निदान, Schrenker ले यस विकार संग के धेरै धेरै गरे, उनले अक्सर आफ्नो दवाई ले रोक्न को लागि, र मिशेल, उनको छोराछोरी, र लगानीकर्ताहरुलाई मूल्य को भुगतान को समाप्त हुनेछ।
Savvy वित्तीय निवेशक क्रोक बदल्यो
Schrenker को स्वामित्व मा तीन वित्तीय कम्पनीहरु: विरासत धन प्रबंधन, विरासत बीमा सेवा, र चिह्न धन प्रबंधन।
तिनकी पत्नी मिशेलले 11,600 डलरलाई तीनवटा कम्पनी र पुस्तकधारकको मुख्य वित्तीय अधिकारीको रूपमा भुक्तान गरे। तिनी विरासत बीमा सेवाको बैंक खातामा थिए, जसले उनलाई चेक लेख्न र पैसा हटाउन अधिकार दिए।
तर 2008 मा Schrenker इंडियाना मा अनुसन्धान को तहत थियो केहि पछि उनको केहि निवेशकहरु द्वारा शिकायत गरे पछि, उनि आफ्नो मुद्रा कसरि संभालने संग परेशान। मित्रहरू, मित्रहरू र छिमेकीका आमाबाबुले लगानीकर्ताहरूमध्ये एकजना शंकास्पद दावी गरेका छन।
डिसेम्बर 20, 2008 मा तलाकका लागि मिशेलले पनि उनको पतिको अपमानिताको बारेमा अध्ययन गर्ने महिलाको साथ दायर गरेको थियो जसले हवाईअड्डामा काम गर्यो।
लगानीकर्ता लावाश जीवन शैली समर्थित
अज्ञात गर्न Schrenker, उनी विरुद्ध यसको दावी गरेका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाका लागि 10 वर्षको लागि अनुसन्धान गरी रहेको थियो। त्यसपछि डिसेम्बर 31, 2008 मा खोजी अन्वेषकहरूले सशस्त्र राज्य अन्वेषकहरू, कम्प्युटरमा भत्किन्छन्, पेपर कार्यबाट भरिएको धेरै प्लास्टिक ट्याबहरू, स्क्रेनरको पासपोर्ट, 6,000 डलर भन्दा बढी पैसा, र स्किनेरको घरबाट लेक्ससको शीर्षक।
6 जनवरी, 2009मा, Schrenker को क्षतिपूर्ति सलाहकार र गैरकानूनी लेनदेन एक निवेश सलाहकार द्वारा अवैध आरोप लगाइएको थियो । जम्मा4मिलियन डलरमा सेट गरिएको थियो।
जिम एटरहोल्टनको अनुसार, जो स्टेट इन्श्योरेशन कम्युनिस्ट थिए, स्नेन्डरले लगानीकर्ताहरूलाई आरोप लगाए "निर्बाध शुल्क" पछि उनीहरूलाई एक वार्षिकोत्सवबाट अर्को र अर्कोमा।
लगानीकर्ताहरू शुल्कको बारेमा पहिले भने थिएन।
तीन दिन पछि,99 जनवरी को, Schrenker कम्पनी कम्पनी विरासत धन प्रबंधन इंक को एक संघीय अदालत मा एमएम फाइनेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी को पक्ष मा शासन गरे पछि एक $ 533,500 निर्णय जारी गरे। मुकदमा मान लिया कि विरासत धन प्रबंधन बीमा अनियमितताहरुमा शामिल थियो र $ 230,000 भन्दा धेरै आयोगहरूको फर्काइएको छ।
आइतबार, जनवरी 11, 200 9, स्क्रेनरले अन्डरसन, इंडियानाको एउटा एकल इन्जिन पिपरमा एयरफिल्डबाट उडान गरे। उनले आफ्नो गन्तव्य डेटिन, फ्लोरिडाको रूपमा सूचीबद्ध गरे।
उहाँले बर्मिंघम, अलबामा नजिकको रूपमा उहाँले एक नकली लगन संकेत बाहिर निस्कनुभयो र एयर ट्राफिक नियन्त्रकहरुलाई भन्नु भएको थियो कि उनी बिग्रिएको घाइते भएका थिए र विमानस्थलबाट निस्कने क्रममा "बेहोशी खारेज" थियो।
त्यसपछि, उनले विमानलाई अटोप्लिटमा राखे र बाहिर पार्यो।
विमानस्थललाई इन्टरनेसनल गर्नका लागि सैन्य विमानहरूले रिपोर्ट गरे कि विमानको ढोका खोलिएको थियो, र ककपिट अन्धकार थियो र खाली देखिन्छ। जेट विमानहरूले विमानस्थलको पछि लागे जुन 200 मेगावाट पछि दुर्घटनाग्रस्त भयो। फ्लोरिडाका सान्टा रोसा काउन्टीमा फ्लोरिडा क्षेत्रको लगभग 50 गजमा झुन्डिएको थियो।
दुर्घटना पछि, विमान भेट्टाउन सकेको थियो। अन्वेषकहरूले विमान खोजे र रिपोर्ट गरे कि यसको भित्र कुनै रगत थिएन र वाशशिल्ड पूर्णतया प्रभावशाली थियो। प्राधिकरणले Schrenker को गिरफ्तारी को लागि एक वारंट आउट गरे।
Schrenker योजना उनको मृत्यु नकली थियो र यसको लागि एक रन बनाइयो। 10 जनवरी को, उहाँले आफ्नो विमान देखि बाहिर पैराशूट दिन को दिन, उनले Harpersville, अलबामा गए र एक भंडारण सुविधा मा एक मोटरसाइकिल, पैसा र अन्य आपूर्ति को धक्का दिए। उनले सुविधाको मालिकलाई जानकारी दिए कि उनी सोमबार फर्किनेछन्।
एक पटक स्क्रेनरले पृथ्वीमा पार्यो भने, उनले यसलाई अलबामा, शेर्सर्सबर्गमा बनाए, जहाँ 2:30 बजे उनले एक निजी निवासीबाट सहयोग माग्न थाले। उहाँले निवासीलाई भन्नुभयो कि उहाँ क्यानोइङ दुर्घटनामा भएको थियो। उहाँलाई नजिकैको शहरमा चढाइएको थियो र स्थानीय प्रहरी स्टेशनमा गए।
उनले प्रहरीलाई क्यानो दुर्घटनामा रहेको बताएका थिए, र उनको (आश्चर्यजनक) वास्तविक परिचय उत्पादन गरेपछि प्रहरीले उनलाई होटलमा राखे, जहाँ उनले नकली नामको तहत दर्ता गरे र कोठाको लागि नगद नगद दर्ता गरे।
निम्न बिहान, विमान दुर्घटनाको बारेमा सुन्नु पछि र यो श्रेनरले दौडिरहेको थियो, पुलिस होटलमा फर्कियो, तर त्यो गयो। Schrenker हर्सर्सविले को पूर्वनिर्मित हिंड्न र आफ्नो मोटरसाइकल पुन: प्राप्त गरे पछि क्विंसी, फ्लोरिडा मा कोओए कलेज को मैदान को घुमाए।
त्यहाँ उहाँले एक रात, काठ, बुड लाइट लेम को छ-प्या प्याक को लागि एक तम्बू साइट खरीदा र कोम्प मैदान को वायरलेस उपयोग सम्म पहुँच दिए गएको थियो।
शर्मिंदा र डरलाग्दो
12 जनवरी को, स्क्रेनरले आफ्नो मित्र, टम ब्रिटटलाई ईमेल गरे र लेखे कि क्र्यास गलतफलता थियो र त्यो पनि "शर्मिंदा र डरलाग्दो" घर फर्काउन को लागी, त्यसैले यसको सट्टा होटलमा जाँच गरियो। उहाँ भन्नु भएको थियो कि उहाँले "चाँडै मर्नुभयो।"
त्यसै दिन, एक हैमिल्टन काउन्टी सुपीरियर कोर्टको न्यायाधीशले मार्कस र मिशेलको सम्पत्ति दुवैलाई पराजित गर्यो।
क्याम्प मैदानको मालिकले शेरिफलाई सम्पर्क गरिसकेका थिए, जुन त्यहाँ जान चाहन्थे कि त्यहाँ कुनै असामान्य चीज थियो। तिनीहरूले अघिल्लो दिन मा जाँच गरेको व्यक्ति को बारे मा शेरिल को भने तर जाँच नहीं गरेको थियो। चाँडै पछि, संयुक्त राज्य अमेरिकाका मार्शलहरूले क्याम्प मैदानको मैदानमा भेटे र उनीहरूले तम्बू भित्र पसेर श्रोकर क्यान्सर, निर्दोष र अपमानजनक फेला पारे। उहाँले आफ्नो कलाई र एक कोहिनी नजिकै एक क्षेत्र मा धेरै आत्म-कटौती कटौती देखि धेरै रगत गुमाएका थिए। उहाँ तालाहासी मेमोरियल अस्पतालमा उडान गर्नुभयो।
13 जनवरी को, स्क्रेनर ले संघीय अदालत मा पेन्साकोला, फ्लोरिडा मा पकडे गए र उनको आरोप लगाइएको थियो कि उनको विमान दुर्घटनाग्रस्त भयो र नकली संकट कल बनाइयो।
परीक्षण र सजावट
फेब्रुअरी 5, 200 9
दुथनका एक व्यक्ति अलबामाले 12 मिलियन डलर प्रदान गरेपछि अलबामा न्यायाधीशले आफ्नो पक्षमा शासन गरेपछि स्लेनकरले उनलाई दोषी हवाई जहाज बेच्यो।
5 जुन, 200 9
Schrenker जानबूझकर आफ्नो विमान दुर्घटना को रूप मा आफ्नो बढ्दो वित्तीय र कानूनी समस्याहरु को बचने को रूप मा दोषी ठहराए। उनी दुई महिना पछि चार वर्ष र3महिनाको जेल सजाय पाएका थिए, कोस्ट गार्डमा $ 34,000 को खोजी र उद्धार प्रयासका लागि प्रतिस्थापनमा र $ 871,000 हार्ले डेविडसनको विमानस्थलमा विमानस्थलमा $ 871,000।
Schrenker पछि प्रतिभूतिय धोखाधड़ी को तीन गिनती र पंजीकरण को बिना एक निवेश बैंकर को रूप मा काम को दुई गणना मा दोषी ठहराया। उहाँलाई नकली विमान दुर्घटनाको लागि अघिल्लो वाक्यको साथ चलाउन 10 वर्षको कैदीको सजा दिइएको थियो, र उनले प्रतिस्थापनमा $ 633,781 डलर तिर्नुपर्ने थियो।
छ वर्ष पछि
सेप्टेकरलाई सेप्टेम्बर 18, 2015 मा जेलबाट रिहा गरियो।
सुजेन बसौको अपराध
एशले पाण्ड जीवनी
वयस्कों को शिक्षक को प्रेरित गर्न को उद्धरण
गिटार स्केल लाइब्रेरी
नयाँ जन्मको बारेमा बाइबल के भन्छ?
क्यास बनाम Ses - फ्रांसीसी गल्ती
दुई स्नातक कार्यक्रमहरू बीच कसरी छनौट गर्नुहोस्
तपाईंको आरा बारेमा
लैटिन व्यक्तिगत Pronouns
मैनहट्टन कलेज प्रवेश
'बेंच हर्मोन गोल्फ' 2-डिस्क को बारे मा निर्देशात्मक डीभिडी समीक्षक
कसरी Conjugate 'Commencer' (सुरु गर्न, सुरूवात, प्रतिबद्धता)
10 ग्याँसहरूको नामहरू र प्रयोगहरू
सबै अमृत संचाल को खल्लिया शुरुवात समारोह को बारे मा
फ्रांसीसी क्रांति / नेपोलियन युद्धहरु को युद्ध: उपाध्यक्ष हरिटोयो नेल्सन
एक बाइक चेन मास्टर लिङ्क के हो र यो के गर्छ?
बैक्टीरियल प्रजनन र बाइनरी फिचन
डेट्रायट मर्म विश्वविद्यालय
उच्चतम पेइङ पोष्ट जॉब्स
प्रायजसो रूढिवादी कांग्रेसले
सेलफोन कति सुरक्षित छन्?
तपाईं लैटिन गहन मर्द्रो 'आईपीएस' ('स्व') कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ?
फ्रीस्टाइल स्लैलोम स्केट्स 101
क्वीन्स कलेज जीपीए, एसएट र एक्ट डेटा